Sahra Cabdullaahi Xade: Weji-qurxinta ma iscadeyn casri ah baa? - BBC News Somali
Sahra Cabdullaahi Xade: Weji-qurxinta ma iscadeyn casri ah baa?
Image caption Ikran Cali oo kamid ah gabdhaha isticmaala Make-up
Dumarku waxay ka mid yihiin dadka ugu badan ee sida wayn u jecel quruxda. Suuqyada ugu badan aduunka waxa lagu iibiyaa dawooyiin iyo kareemyo kala duwan oo dumarka ay isku qurxiyaan.
Waxa jira dhibaatooyin ay kala kulmaan isticmaalka waxyaabaha laysku qurxiyo, sida isbedel jirka ku dhaca iyo in qoraxda ay u adkeysan waayaan, sida ay sheegeen khubarada caafimaadka.
Isqurxinta ama turukada waxaa aad u isticmaala dumarka magaalooyiinka ku nool. Gabdha badan oo Soomali ah ayaana qeyb ka ah kuwa adeegsada.
Waxa laga gudbayaa habka qurxinta midab badalka iyada oo loo gudbayo hab ka fudud oo ay dumarku u isticmaali karaan isqurxin waqti kooban oo la iska dhaqi karo.
''Labada hab wax badan ayay ku kala duwan yihiin, kii hore waa mid aad midabkaaga ku badalaysid oo hadhow dhib kuu keenaya, kana waa wax aad mudo yar marsanaysid oo hadhow aad si yar isaga dhaqaysid wax dhib ah ma arkaysid,'' sidaas waxaa BBC-da u sheegtay Sahra Cabdullaahi Xade oo baratay habka qurxinta casriga ah.
Image caption Sahra oo ku guda jirta shaqadeeda Make-Up ka
Isticmaalka weji-qurxinta ayaa siyaabo kala duwan u saameeyeya gabdhaha da'yarta ah iyo ku waawayn. Kuwa dhallinta yar waxay u baahan yihiin mid ka fudud noocyada ay isticmaalaan gabdhaha waawayn. Waatan markale Sahra oo ka hadlaysa arinkan.
''Qofka marka uu waynaado wajigiisa wuu isbdalayaa marka waxa loogu talagalay in wajigiisu ifo oo gabar yar uu ku soo noqodo, marka gabdhahan yaryar ay marsadaan wajigooda ayaa isbadalaya, quruxdiisana way isdhimaysaa, mar walba oo badsado dhalaalka wuu isdhimayaa''
Gabdhaha isticmaala isqurxintan ayaa aaminsan in ay kalsoonidooda dhan tahay marka ay marsadaan Makeup-ka.
Image caption Sahra Cabdullaahi oo ku shaqeysa habka qurxinta
''Anigu waxan aaminsanahay hadii aan marsado iyo hadii aanan marsan in aan qurux badanahay, marka aan u socdo munaasabad ama aroos qurux ayuu kugu sii siyaadinayaa. Dadka kale hortooda waad istaagi kartaa masrax camal waad fuuli kartaa,'' sidaas waxa BBC-da u sheegtay Ikraan Cali Xasan oo kamid ah gabdhaha marsada Make-upka.
Haweenkii hore ayaa u arka dhamaan waxyaabaha laysku qurxiyo in aysan haboonayn, mar walba waxay lawadaagan gabdhaha ay dhaleen "ha isticmaalina". Ikraan oo ka sheekaynaysa arrin dhex martay iyada iyo hooyadeed,
''Hooyo waxay tiraahdaa, marka aan wejigeyga qurxiyo, waxad u eegtahay 'qumayo afgaduudan', dhammaan waxaan isticmaalayo way ka soo horjeedaa waxay igu waanisaa qurux waa tii ilaahay ku siiyay sidan ku bax''.
Dhaqaale badan ayaa kaga baxa gabdhaha isticmaalka Make-up si ay u qataan xiliyada farxada ee ay joogaan goloyaasha kulmiya gaddhaha sida aroosyada iyo xafladaha gaarka ah.